अटोमेटिक पानी तान्ने र मोटर बन्द गर्ने मेसिन | Consumer Electronics | Kinbech Nepal
अटोमेटिक पानी तान्ने र मोटर बन्द गर्ने मेसिन
Location: jorpati,boudha, Kathmandu
Seller's Mobile: 9861107861 Contact on WhatsApp
अटोमेटिक पानी तान्ने र मोटर बन्द गर्ने मेसिन अब मात्र रु. २५००/- मा । एकवर्षे वारेन्टी सहितको मेसिनलाई मात्र रु. ६०००/– कहिले पानी भर्न बिर्सिएर समस्या त, कहिले ट्यांकी भरिएर पानी पोखिएर समस्या🤦‍♀️ तर अब चिन्ता गर्नुपर्दैन । 🤩 अब Electronic and plumbing solution सप्लायर्सले ल्याएको छ यसको समाधान । अटोमेटिक पम्प गार्ड जडान गर्नुहोस् र सारा झन्झटबाट मुक्त हुनुहोस् । जडानको लागि अन्य थप शुल्क लाग्नेछैन । 📌यसका फाइदाहरुः ✅पानी ट्यांकी खालि भएपछि मोटर आफैँ अन हुने । ✅पानी ट्यांकी भरिएपछि मोटर आफैँ बन्द हुने । ✅रिजर्भ ट्यांकीमा नै पानी नभएको खण्डमा रुफ ट्यांकी खालि भए पनि मोटर अन नहुने र रिजर्भ ट्यांकीमा पानी भएपछि मात्र मोटर अन हुने । ✅बिजुलीको महसुल बचत हुने ✅सर्ट सर्किट हुनबाट बचाउने ✅आवश्यक परेको खण्डमा Manually पनि अन अफ गर्न मिल्ने । ✅१ वर्षको ग्यारेन्टी विशेष जानकारीका लागि 📞 सम्पर्क नंबर ः 9861107861 अर्डका गर्नका लागि कृपया घरको ठेगाना र नंबर म्यासेज गर्नुहोला । नोट : अन्त सस्तोमा पाइन्छ भनेर नझुक्किनुहोला, ६००–७०० मा पाइने भनेको एउटा सेन्सर मात्र हो । वारेन्टी, ग्यारेन्टी नचाहिने र आफैँ जडान गर्ने हो भने हामी सस्तोमै सामान उपलब्ध गराउँछौ । त्यसैले नझुक्किनुहोला ।E & P सप्लायर्स नै रोज्नुहोला।
water pump controller float switch